Richard Mille oyiri | Ele Anya 1: 1 Super Clone Vs Real Original Knockoff
Akụkụ / Ngwa
Richard Mille ese
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon
Tourbillon Winding akpaaka
Ndụ ikuku na-efe efe akpaghị aka Chronograph
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon erotic
Akpaaka ikuku Extra Flat
Chronograph akpaghị aka nkewa-sekọnd
Oge ikuku ikuku akpaaka
Aka Ntugharị akpaghị aka
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon na-ama jijiji ACJ
Akwụkwọ ntuziaka Winding Yohan Blake
Chronograph Regatta na-efegharị akpaaka
Mechanical isi iyi pen
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Worldtimer Jean Todt
Akwụkwọ ntuziaka Winding Bubba Watson
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Pharrell Williams
Akpaaka Winding Tourbillon McLaren Speedtail
Ụgbọ elu Chronograph na-efe efe na-akpaghị aka
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Chronograph Aviation
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon G-sensor Sébastien Loeb
Igwe ikuku akpaaka Rafael Nadal
Akpata ikuku Flyback Chronograph Les Voiles de Saint barth
Elekere ikuku na-efe efe na-akpaghị aka Chronograph Diver
Chronometer arụmọrụ dị elu nke akwụkwọ ntuziaka
Igwe ikuku na-akpaghị aka na rotor declutchable
Akpaaka Winding Le Mans Classic
Mpekere akpaaka na ụbọchị karịrị oke
Elekere ikuku mmiri mmiri na-akpaghị aka
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Rafael Nadal
Ihe nlegharị anya nke Winding Tourbillon Chronograph
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Chronograph Diver's elekere
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Aerodyne
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Pocket Watch
Akwụkwọ ntuziaka Winding Tourbillon Extra Flat
Chronograph GMT na-efe efe na-akpaghị aka
Chronograph Roberto Mancini na-efegharị ikuku na-akpaghị aka
Sapphire ikuku na-akpaghị aka
Seramiki agba na-akpaghị aka
Banyere Richard Mille oyiri
Richard Mille oyiri adịghị ka Patek Philippe, Vacheron Constantin, na ụdị ndị ọzọ nwere ogologo mmiri ozuzo na ọnụọgụ teknụzụ. Naanị ihe na-erughị afọ 20 nke akụkọ ntolite, ha nwere ike ibi n'ọkwá dị elu, ndị ọgaranya na ndị a ma ama n'ụwa na-achọkwa ha. Na nke a, ọ bụ ụdị a na-enwetụbeghị ụdị ya. N'azụ ụdị ewu ewu a, echiche ọhụụ nke onye guzobere enweghị nkewa. Mana nke kachasị mkpa, ọ na-eji ihe ndị kachasị elu na teknụzụ.
Akụkụ dị ukwuu nke mmụọ nsọ maka adịgboroja Richard Mille sitere na ịgba ọsọ na nyocha nyocha. Ngwa ya a kapịrị ọnụ na-eme ka o kwe omume ịkwalite nkwụsi ike nke efere ala, belata esemokwu, ma nye nche elekere dị elu dị egwu. Echiche na akụrụngwa sitere na Formula One tọrọ ntọala maka elekere Richard Mille mbụ (RM 001), nke bụ otu nkuku ntọala nke ụdịrị amamihe.
Richard Mille Clone kpebiri iji ụgbọelu, Formula One  mee ihe, yana akụrụngwa kachasị mma eji arụ ọfụma, dịka ọkwa tit titan 5, LITAL, carbon TPT, na graphene, iji mee elekere dị larịị ma zie ezi. Ya mere, ARCAP-ihe ya na njirimara ya, gụnyere corrosion na magnetik ubi na-eguzogide-eji maka oge mbụ na RM nche akụkọ ihe mere eme 002
Richard Mille 1: 1 kwadoro ụlọ ọrụ na-eduzi ụwa nke ihe eji ebu ibu ibu North Thin Ply Technology  na usoro otu ndị nrụpụta iji mepụta carbon NTPT na quartz TPT RM 27-02 Rafael Nadal. Dị ka RM 11-03 McLaren. Richard Mille Tourbillon nwere ike ịnabata akụkụ 1,000 na ikpe nke ọkpụrụkpụ naanị 45 mm.
Modelsdị ndị a ma ama nke ika ahụ bụ tourbillon RM 008 (chronograph tourbillon) na sapphire kewara aka abụọ (chronograph tourbillon). RM 008 jikọtara njem tourbillon site na iji windo ntuziaka, aka nke oge chronograph, akara ngosi, na ike. Ndabere egosi. A maara ya dị ka otu n'ime elekere kachasị elu na ụwa, ọnụahịa bidoro na 500,000 Euros. N'ihi na ọ bụ ewu ewu, ndị na-emepụta okike elekere na-emepụta elekere a, mana Richard Mille na-efu $ 699. Okwesiri ikwuputa na ihe eji ese oyiri bu kwa uzo kachasi elu n'ime ulo oru.
Richard Mille Knockoff bụ ezigbo nkà na ụzụ. Ihe ndị kachasị elu emeela ka ọ bụrụ nke a na-agaghị ebibi. Ọdịdị ha pụrụ iche, nke ọdịnihu ga-eme ka ha dị mma maka onye ọ bụla na-anụ ọkụ n'obi na-achọ ihe n'èzí igbe elekere.
Ihe kpatara 4 iji zụta elekere na weebụsaịtị anyị
Ihe kachasị dị n'ime ime na tourbillon, chronograph, ma ọ bụ ọrụ GMT
Ihe mgbanwe, ọkụ na ike mbipụta pụrụiche pụrụ iche nwere ike tinye uru
Adịghị adị Richard Mille oyiri ese
Anyị na ngwaahịa na-mere Guangzhou, China. Ahịa kachasị n'ahịa zuru ụwa ọnụ n'ụwa. richardmille.to enweghị ụgwọ zoro ezo. 699 $ gụnyere ụgwọ nzipu ozi, mbufe n'akụkụ niile ụwa. Biko rịba ama na anyị na-eweta ụdị ọhụụ, ọ bụghị ụdị dị ọnụ ala.
Adịghị adị Richard Mille oyiri ese, The seramiiki elu na ala ikpe na-imported si Taiwan na-esichara site ATPT ceramik na-etolite Y-TZP ceramik. Mgbe teknụzụ na-eme mkpịsị aka dị elu, ha na-eweta ihe dị nro na nro sub-black. Agba agba a agbanwebeghị otu narị afọ. Agba na luster bụ ihe zuru ezu iji nweta seramiiki ụda visual ụkpụrụ electroplating elu na ala shells ndị na-infinitely nso mbụ ngwaahịa, na mgbochi reflective mkpuchi sapphire iko! Teepu ahụ na-eji eriri rọba nke dị nro na nke dị nfe nke Malaysian webatara, na mmegharị ahụ nwere usoro Seiko NH dị na ya. A na-eme mkpọchi nke ụdị a dabere na nha mbụ na mkpa, na-eme ka ọ nwekwuo ntụsara ahụ na mmekọrịta chiri anya, ụdị kachasị elu na ahịa Richard Mille Replica.
Copyright © 2022 Richardmille.na